Xildhibaanada BF oo ka hadlay ajnabiga loo magacaabayo gudoomiyaha Bankiga Dhexe - News - Wararka - Somali Forum - Somalia Online
Xildhibaanada BF oo ka hadlay ajnabiga loo magacaabayo gudoomiyaha Bankiga Dhexe
Muqdisho (Caasimada Online) – Qaar kamid ah xildhibaanada golaha Shacabka Soomaaliya ayaa waxa ay gebi ahaanba ka hor imaadeyn in nin ajnebi ah gudoomiye looga dhigo Bankiga dhexe ee Soomaaliya.
Warka ah in nin ajnebi ah uu jagadaasi qabanayo ayaa ah hadal heynta ugu badan ee xildhibaanada ay aadka u hadal hayaan, waxaana sidoo kale uu si aad ah ugu baahay baraha bulshada.
Xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxa ay walaac ka muujinayaan in ninkaan loo dhiibo Bankiga dhexe ee Soomaaliya, waxa ayna khaarkood baraha bulshada soo dhigeen qoraalo ay ku dhaliilayaan go’aanka ninkaan loogu dhiibayo Bankiga dhexe ee Soomaaliya.
Xildhibaan Cabdirisaaq Axmed Maxamed Jindi oo ka mida Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sharcidaro ku tilmaamay in nin Ajinabi ah loo magacaabo Gudoomiyaha Bankiga dhexe ee Soomaaliya.
Xildhibaanka ayaa sheegey in ay wararka sheegaya in Bankiga Dhexe ee Soomaaliya loo Magacaabayo Nin Ajinabi ah ay ku arkeen Baraha Bulshada hadii uu jirana uu yahey Sharci daro.
Waxa uu sheegey in ay ka doodi doonaan Xildhibaanada Faderaalka Soomaaliya hadii la isku raacana uu sharci noqonayo,balse uu rajeynayo in Xildhibaanadu ka soo horjeesa doonaan Go’aankaan Godoomiyaha Bankiga dhexe looga dhigaayo Nin Ajinabi ah.
Sharcigaan Gudoomiyaha Bankiga dhexe looga dhigaayo nin Ajinabi waxaa horey u ansixiyey Golaha Wasiirada Soomaaliya waxaana lagu wadaa in Maalinta Isniintaa ee socota in horgeeyo Baarlamaanka Soomaaliya.